Haweeneey laga duubay muuqal galmo ah oo nolosheeda galaaftay - BBC News Somali
Haweeneey laga duubay muuqal galmo ah oo nolosheeda galaaftay
Image caption Hooyada dhashay Tiziana'ayaa waxa ay xusuusataa quruxda gabadheeda
"Aad ayay u quruxbadnayd balse qof nugul ayay ahayd ," ayay tiri Teresa Petrosino, oo ay 15 sanadood saaxiibo ahaayeen. " Waxaa u kulmay dad xun iyo xilli xun." ayay intaa ku dartay.
Waxa uuna hadalkeedaas dadkii daawanayey u fududeeyay in si cabsi la'aan ah u daawadaan muuqaalkeeda galmada ah sababtoo ah waa ay ku farax sanayd in laga duubo cajalka.
Haweeneey dhinaceeda dhulka la dhigi waayey
Haweeneey si la yaab leh u badbaadisay dad ay gurigeeda ku magan galisay
"Tiziana Cantone, iyo aniguba si caadi ugama aan wada hadal faah-faahinta muuqaalka,"ayay tiri saaxibteed Teresa. "Weligeey ma daawan, mana doonayo in aan daawado. Waad qiyaasi kartay in ay dhibanatahay. Balse waxa ay u muuqatay qof adag."
"Nolosha ayay ciriiri ku gashay oo xitaa banaaka waa ay u soo bixi weysay sababtoo ah marka ay dibedda u baxdo dadku ayaa aqoonsanayaan. Waxa ay xaqiisatay in nolosha adduunka iyo tan aakhiraba ay isku midyihiin,sida ay aaminsaneed " ayay tiri Teresa.
Image caption Maria Teresa oo ah hooyada dhashay Tiziana ayaa haatan isku shuqleeysa sidii ay ku difaaci lahayd magaca gabadheeda
"Gabadheeydu waa ay wanaagsanayd balse khatarta ayay u nuglayd sabatoo ah waxa ka maqnaa kaalintii aabaha oo weligeed ma aysan arag, marka taasi ayaa nolosheeda saameyn ku yeelatay," sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Maria Teresa oo ah hooyadda dhashay gabadha.
"Dumaashideey ayaa isoo wacday, si deggen ayayna ila hadashay waxa ay igu tiri imoow guriga; markii aan gaaray guriga ayaa waxaan arkay boolis iyo ambulance, marka durbadiiba waan fahmay in ay gabdheeyda is dishay," ayay tiri Maria Teresa.
"Maalintii ay geeriyootay, ayay noloshaydana u dhamaatay."